अभिताभ बच्चनको फिल्मका खेलेका यी अभिनेता जब चोरेको मोबाइल सहित पक्राउ परे..? - Thulo khabar
अभिताभ बच्चनको फिल्मका खेलेका यी अभिनेता जब चोरेको मोबाइल सहित पक्राउ परे..?
मोबाइल चोरीको लागि गिरफ्तार भएका एक अभिनेता अमिताभ बच्चनको फिल्ममा काम गरिसकेको समेत पाइएपछि प्रहरी समेत अचम्ममा परेको छ । नागपुर रेलवे पुलिसले महाराष्ट्रमा चार मोबाइल चोरहरूको एक गिरोहलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । आश्चर्यजनक कुरा के हो भने पक्राउ परेका आरोपीहरुमा प्रियांशु क्षेत्री नामक फुटबल खेलाडी पनि सामेल छन् । आरोपित प्रियांशु क्षेत्रीले अमिताभ बच्चनको फिल्म झुण्डमा अभिनय गरेको कुरा प्रहरीमा खुलासा गरेको छ।
चोरहरूबाट १४ वटा मोबाइल जफत गरिएको छ। अचम्मको कुरा यो छ कि पक्राउ परेका आरोपीहरुमा एक अभिनेताका रूपमा काम गर्ने प्रियांशु क्षेत्र्री नामका एक फुटबल खेलाडी पनि छन् । आरोपित प्रियांशु क्षेत्रीले पुलिसलाई खुलासा गरेको छन् कि उनले अमिताभ बच्चनको फिल्म झुण्डमा अभिनय गरेका थिए । फिल्म नागपुरमा शू ट गरिएको थियो । रमाईलो गर्न पर्याप्त पैसा नभएको कारण अभियुक्तले मोबाइल चोरीको सहारा लिएको पनि थाहा भएको छ ।
नागपुर रेलवे पुलिसका इन्सपेक्टर सतीश जगदाले भन्छन् कि नागपुर रेलवे स्टेशनको बाहिरी छेउमा उभिएको ट्रेनको ढोकामा उभिएको यात्रुबाट मोबाइल चोरीएको थियो । पुलिसले विगत धेरै दिनदेखि यस मोबाइल स्ने चिं ग गिरोहको खोजी गरिरहेको थियो । यसैबीच, मोबाइल फोन चोरी गरेको आरोपमा प्रियांशु नामक एक आरोपी पक्राऊ परेको छन् ।
उनले पुलिसलाई अन्य दुई साथीको नाम भने । पक्राउ परेका आरोपीहरूमा प्रियांशु क्षेत्री, शुभम जम्भुलकर र सतेन्द्र यादव रहेका छन् । रेलवे पुलिसले उनीबाट १४ चोरी मोबाइल फोन बरामद गरेको छ । यी व्यक्तिहरू रमाईलो गर्न चोरी गर्थे । आरोपितहरू मोबाइल चोरेर कम मूल्यमा बेच्थे । पुलिसले खुलासा गरेको छ कि आरोपीहरूले रमाईलो गर्न, पार्टीमा पैसा प्रयोग गरिरहेका थिए ।